‘कबड्डी ३’ समीक्षा: सरल कथा, सटिक प्रस्तुति – Khabar Silo
मुस्ताङको नौरीकोटमा बस्ने वीरकाजी शेरचनको जीवन यतिबेला फिक्का छ । किनकि, उसले माया गरेकी मैयाँ गौचनले काजीलाई छोडेर गइसकेकी छ ।वीरकाजीले लामो समय मैयाँको माया पाउन कसरत गरिसकेको छ । अर्कैसँग भागेर गइसकेकी मैयाँ फर्केर आउनेमा अझै पनि उत्तिकै विश्वास र आशक्ति छ वीरकाजीको ।
वीरकाजी र मैयाँको यो कथा हो, चलचित्र ‘कबड्डी’ को । ‘कबड्डी’ हेरेका दर्शकलाई मैयाँ र वीरकाजीको कहानी पक्कै याद छ ।चलचित्र ‘कबड्डी’ को तेस्रो सिक्वेलसम्म आइपुग्दा वीरकाजी शेरचन दयाहाङ रा ले बल्ल बुझेको छ, माया जबरजस्ती नहुने रहेछ । बल प्रयोग गरेर माया पाइने रहनेछ ।
जबरजस्ती कसैलाई आफ्नो बनाउने चेत वीरकाजीमा पलाए पनि मैयाँकै बाटो कुरेर बसेको छ ऊ। मैयाँको माया पाउन मरिहत्ते गरेको काजीको सिद्धान्त त्यतिबेला डगमग गर्छ, जब उसको जीवनमा काँशी उपासनासिंह ठकुरी को इन्ट्री हुन्छ।अघिल्ला दुई सिरिज सुपरहिट भएपछि त्यसको निरन्तरता दिँदै उही चरित्र र कथावस्तुको उठान गरेर चलचित्र ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ को कथा उनिएको छ । केन्द्रीय भूमिकामा वीरकाजी नै छ । थप, कथामा केही नयाँ ट्वीस्ट र पात्र थपिएका छन् ।
‘कबड्डी’ को पहिलो र दोस्रो सिक्वेल हेरेका दर्शकलाई काजी र मैयाँको चरित्र थाहै छ । तेस्रो सिक्वेलमा आइपुग्दा मैयाँको मायामा डुबेको काजी आफ्नो मायाको सिद्धान्तमा धरमर हुन्छ ।बाआमा उमेर ढल्किसकेको छोराको बिहेका लागि केटीको खोजी गरिरहेका हुन्छन् । यता वीरकाजी बिहे नगर्ने बरु शहरमा गएर व्यापार गर्ने सोचमा अडिग हुन्छ । परिवारले दयाहाङलाई दबाबमा पारेर बिहे गर्न कर लगाइरहन्छ।
वीरकाजीको जीवनमा काँशीको प्रभाव परेपछि अगाडि बढ्ने घटनाक्रम नै फिल्मको कथानक हो । के काजीले काँशीको माया पाउँछ? कि छोडेर गएकी मैयाँ फेरि फर्केर आउँछे? यस्तै प्रश्नमाथि चलचित्रको कथा घुमेको छ ।वीरकाजीको भूमिका निभाएका दयाहाङ राईको अभिनय पात्र सुहाउँदो छ । अघिल्ला सिक्वेलमा झैँ यसमा पनि दयाहाङले अब्बल अभिनय गरेका छन् । उनले पात्रको मनोविज्ञानलाई अभिनयमा दुरुस्तै उतारेका छन् ।
दोस्रो चलचित्रसम्म आइपुग्दा उपासना सिंह ठकुरीले उत्तिकै दमदार अभिनय गरेकी छिन् । गाउँले युवतीदेखि शहरीया युवतीसम्मको भूमिकामा प्रस्तुत भएकी काँशीको पात्रमा पाइने सोझोपना, पात्रको मनोविज्ञान र बाध्यात्मक परिस्थितिले सिर्जना गरेको परिवेशलाई उपासनाले जस्ताको तस्तै पर्दामा उतारेकी छिन् । उनको काम तारिफयोग्य छ ।
यस्तै चलचित्रमा शीर्ष भूमिका निभाएका माओत्से गुरुङ, पुष्कर गुरुङ, विजय बराल, लुनिभा तुलाधर, बुद्धि तामाङ लगायत अन्य कलाकारले पनि सशक्त अभिनय गरेका छन् । कुशल कथा र पात्रको अभिनयको संयोजनले चलचित्रले दर्शकको ध्यान तान्न सफल हुन्छ ।चलचित्रको सबैभन्दा बलियो पक्ष यसको स्किृप्ट हो । उपेन्द्र सुब्बा र रामबाबु गुरुङले चलचित्रको कथा र संवादको संयोजन पात्र सुहाउँदो बनाएका छन् ।प्लटकै कारण चलचित्रले शुरुदेखि अन्तिमसम्म दर्शकलाई बाँधेर राख्छ । सँगसँगै दर्शकलाई पात्रको परिस्थितिसँग पनि साक्षात्कार गराइदिन्छ । जसले गर्दा दर्शकलाई आफू सोही गाउँमा पुगेको अनुभूति हुन्छ ।
चलचित्रको छायांकन र ध्वनि संयोजनले दर्शकलाई खल्लो बनाउँदैन । छायांकन पक्षलाई प्रभावकारी रुपमा चलचित्रमा उतारिएको छ ।मुस्ताङका सुन्दर दृश्यभन्दा पनि कथाले खोजेको दृश्य चलचित्रमा देख्न सकिन्छ । यस्तै ध्वनि संयोजन र गीतले पनि चलचित्र स्तरीय बनाउन थप बल पुर्‍याएको छ ।यति हुँदाहुँदै पनि चलचित्रमा केही पक्ष भने अस्पष्ट छन् । जस्तो कि, काँसीका प्रेमी ध्वाँसे (कर्मा) को भूमिकाबारे चलचित्रमा देखाइएको छैन ।
केही संवादमार्फत महिलाप्रति सहानुभूति दर्शाइए पनि चलचित्रमा काँशीको भूमिका निरीह देखाइएको छ । काँशीले बारम्बार ‘मर्छु’ भनेर जिद्दी गर्ने युवकलाई कसरी चोखो माया गर्छे?सधै ‘रिजेक्ट’ गरिरहने युवतीका लागि किन ध्वाँसे गाउँसम्म पुग्छ? युवकको काँशीतर्फ एकतर्फी आशक्ति देखिन्छ । तर, त्यही युवती उही प्रेमीसँग भाग्नका लागि एकैछिनमा तयार हुन्छे ।
चलचित्रको परिवेश नयाँ गाउँमा सेट गरिएको छ । कथाले दर्शकलाई नयाँ ठाउँमा लैजान्छ । नयाँ पात्रसँग साक्षात्कार गराउँछ । तर, क्लाइमेक्समा पुन उही नदीको बगरमा कथा अल्झिन्छ । यसले दर्शकलाई मोनोटोनस गराइदिन्छ ।यद्यपि घरेलु दर्शकका लागि यो चलचित्र यस वर्षको हेर्नुपर्ने चलचित्रमध्ये एक हो । मौलिक भाषा र सटिक प्रस्तुतिमा कथा प्रस्तुत गरी दर्शक हँसाउनमा निर्देशक गुरुङ माहिर देखिएका छन् ।
चलचित्रमा उनले कमेडी मात्र प्रयोग गरेका छैनन् । समाजमा चलिआएका कतिपय विकृत्तिको विरुद्धमा पनि आवाज उठाएका छन् । समाजको कथालाई हेर्न चाहने दर्शकका लागि यो चलचित्र राम्रो रोजाइ हो ।यो चलचित्रले जबरजस्ती दर्शक हँसाउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई तोडेको छ । चलचित्र हेरिसक्दा पात्रले दिमागमा छाप छोड्न सफल हुन्छन् । अर्को कुरा, ‘कबड्डी ३’ हेर्ने दर्शकलाई यसको अर्को सिक्वेलको प्रतीक्षा भने अवश्य गराउने छ ।
नायिका स्वस्तिमा खड्का आफूलाई स्टार नायिका भन्न रुचाउँदिनन् । किनकी, उनले अझै पनि धेरै काम चलचित्र क्षेत्रमा गर्नुछ भन्ने सोचाई राख्छिन् । तर, पनि स्वस्तिमालाई कहिलेकाही विभिन्न कुराले विवादमा भने ल्याउँछ । स्वस्तिमा, चलचित्र क्षेत्रमा चम्किएकी छिन् । केही हिट ब्यानरका हिट चलचित्रमा सहकार्य गरेपछि चम्किएकी स्वस्तिमालाई ‘बुलबुल’ चलचित्रले अर्को उचाइमा पुर्याएको थियो । यो […]